Shiinaha warshada shiidaalka sameeya iyo soosaarayaasha | Kiimikada Kiimikada
Heerka fulinta: GJB617A-2003
1. Macluumaadka Badeecada
Daawada 'ammonium perchlorate' waa dhalo cad, oo lagu qasi karo biyaha iyo 'hygroscopic'. Waa nooc ka mid ah oksidheeyeyaal xooggan. Marka AP lagu qaso wakiilka yareeya, noolaha, walxaha gubta, sida, baaruudda, fosfooraska ama budada birta ah, isku darku wuxuu sababi karaa halista gubashada ama qarax. Markii lala xiriiro aashito adag, isku darku wuxuu kaloo yeelan karaa qatar qarax.
1.1 Qaaciddada qaabdhismeedka:
1.2 miisaanka maadada: 117.49
Caddaan, goolal-goobeed ama non-spherical crystalline
jajab, ma laha wasakhda muuqata
Waxyaabaha ku jira AP (Gudaha NH4ClO4),%
Waxyaabaha Chloridate (NaCl),%
Waxyaabaha chlorate (NaClO3),%
Waxyaabaha Bromate (NaBrO3),%
Waxyaabaha Chromate (In K2CrO4),%
Waxyaabaha ku jira Fe (Fe),%
Maaddada Biyaha aan La Kala Bixin,%
Waxyaabaha dambas ee lafeeyay,%
Awood-darida (177 ± 2 ℃), h
Sodium lauryl sulfate,%
Biyaha dusha sare,%
Jilicsan （Nooca I）
Jajaban （Nooca II）
Jilicsan （Nooca III）
Fasalka C: Tusmada cabbirka walxaha
Miisaanka micnaheedu waa dhexroor, μｍ
Weecasho Dufcaddii Dufcaddii, μｍ
Fasalka D: Tusmada cabbirka walxaha
Waxyaalaha baaritaanka ，%
3. Codsiga: AP waxaa loo adeegsaday oksijiye ahaan ridaha gantaalaha iyo walxaha qarxa ee isku dhafan. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa rashka, wakiilka kahortaga roobka, oksijiyeerka, wakiilka falanqaynta, wakiilka cuncunka, iwm .Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu soo saaro borohydrides kale, hoos u dhig, wakiilka wareegaya ee qoryaha iyo waraaqda, wakiilka xumbada caaga, boranes, iwm. Intaas waxaa sii dheer, AP waxaa loo adeegsadaa cabbiraadda nuxurka fosfooraska iyo daawooyinka.
4. Xidhmo: Baakad foosto bir ah oo ku jirta bac balaastik ah oo gudaha ah. Ka dib markaad hawada ka saarto bacda, afka bacda waa in la adkeeya.
5. Kaydinta: Waxaa lagu kaydiyaa meel qabow, qalalan oo hawo leh. Xaaraantin kuleylka iyo qorraxda lagu dubay. Nolosha shelf: 60 bilood. Weli waa la heli karaa haddii natiijooyinka dib-u-eegista guryaha ay u qalmaan taariikhda dhacday ka dib. Ka fogow waxyaabaha gubta iyo waxyaabaha qarxa. Ha ku kaydin wadajirka waxsoosaarka, alaabta dabiiciga ah, ee guban kara.
6. Gadiid: Iska ilaali roobka, qorraxda lagu kariyo. Shil gacan ka hadal ah
Xiga: 2, 2′-Bis (ethylferrocenyl) propane (Nadaafad Sare)
Amooniyam Perchlorate loo isticmaalo rashka
qiiqa oksijiin amooniyam
goos goos ah oo loo yaqaan 'Amiumium Perchlorate'